Motivation for success :: को हुन् शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवसँग टाँसिएर होटल हिमालयमा छिर्ने महिला ?
को हुन् शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवसँग टाँसिएर होटल हिमालयमा छिर्ने महिला ?
काठमाडौँ – शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुन् डा.रमेशकुमार सिंह । त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी छिन्, विधि र व्यवस्था परिवर्तनको संघर्षबाट आएकी नेतृ रामकुमारी झाँकी ।
मन्त्री र सचिवको व्यवहार ठिक उल्टो छ । मन्त्री आन्दोलनको रापबाट सिंहदरबार छिरेकी छन् भने सचिव उनीभन्दा ठीक उल्टो, माया–प्रेमको संघर्षमा लिप्त !
त्यही मन्त्रालयअन्तर्गतको एक परियोजनामा छिन्, झापाली महिला । मन्त्रालयको सहसचिव वा विकासविज्ञ मात्र नियुक्तिको योग्यतामा पर्ने उक्त निकायमा ती महिला आयुक्त पदमा नियुक्त भएकी छन् ।
सचिव सिंहले कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा एउटा अलग्गै कोठा लिएका छन् । त्यही कोठामा उनै महिला आयुक्तसँग नियमित ‘बैठक’, ‘छलफल’ जारी रहन्छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएकी हुन्, तर ओलीले चिनेर, चाहेर वा भनेर नियुक्त भएकी हैनन् । ऐनविपरीत उनलाई त्यहाँ नियुक्ति दिलाउने काम सचिवले गरेका हुन् ।
जब यथार्थ कुरा माधवले सुने, त्यसपछि सचिव र ती महिला दुवैलाई भेट्ने समय नदिनू भन्ने निर्देशन छ ।
ती महिला सरकार विस्तार हुनुअघि माधवलाई भेट्न कोटेश्वर गइरहन्थिन् । रामकुमारी मन्त्री भएपछि रामकुमारी र माधवकै पनि निकै चाकडी गरिन् । तर, न मन्त्रीले न पार्टी अध्यक्ष, दुबैले उनको शैलीलाई रुचाएनन् ।